Na tsy eo intsony aza i Régis… : mitohy ny fiarahan’ny Madagascar All Stars | NewsMada
Na tsy eo intsony aza i Régis… : mitohy ny fiarahan’ny Madagascar All Stars
Par Taratra sur 19/10/2017
Hanao ahoana ny tohin’ny lalan’ny Madagascar All Stars? Voavaly ny ahiahin’ny mpankafy, taorian’ny nahalasanan-dRégis Gizavo.
Volana vitsivitsy lasa izay no lavo teo am-pitendrena teny an-tsehatra i Régis Gizavo… Fahavoazana lehibe ho an’ny tontolon’ny mozika malagasy sy maneran-tany mihitsy, raha tarafina tamin’ny lazan’ity mpanakanto mpiangaly ny angorodao ity. Anisan’ireo mahatsapa fahabangana goavana ny Madagascar All Stars, tarika iray niarahany nanangana amin’ireo kalaza amin’ny mozika malagasy. Nandritra ny fanomezam-boninahitra natao an’i Régis tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, efa nanambara ireo namany ao amin’ny tarika fa tena andry izy, ary tsy hay hosoloina ny zava-bitany…
Mitohy anefa ny fiainana… Ny mozika rahateo, mitoetra hatrany. Mitraka ary manohy ny lalana ny tarika Madagascar All Stars. Fantatra fa efa misy ny daty iray, ny 24 oktobra ho avy izao, hiakaran-dry Eric Manana, Justin Vali, Jaojoby, Dama ary Ricky an-tsehatra ao amin’ny Théatre de Longjumeau, Frantsa. Tsy maintsy hisy ampaham-potoana lehibe hatokan’ireo namany ho fahatsiarovana an’i Régis, indrindra fa sarotra ho azy ireo ny hanadino ny feon’angorodaony, nandravaka ireo hira rehetra niarahan’ny tarika hatramin’izay.
Ankoatra ny Madagascar All Stars, fantatra fa tafaraka any Frantsa ka hanohy ny seho iarahany koa i Eric Manana sy i Dama. Hiaka-tsehatra ao Bordeaux izy mirahalahy ireto, ny zoma 20 oktobra izao, avy eo any Genève ny 29 oktobra.